Siilaanyo wuxuu cadaystay in uu Xoog iyo Xeelad dalka iyo dadkaba ku haysto maadaama uu digreeto ku cayimi waayey waqtigii doorashooyinka la qaban lahaa.Bal u fiirsada fadeexadahan hoose!. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏ | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Siilaanyo wuxuu cadaystay in uu Xoog iyo Xeelad dalka iyo dadkaba ku...
Siilaanyo wuxuu cadaystay in uu Xoog iyo Xeelad dalka iyo dadkaba ku haysto maadaama uu digreeto ku cayimi waayey waqtigii doorashooyinka la qaban lahaa.Bal u fiirsada fadeexadahan hoose!. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏
Waxaa nasiib daro dalka saameysay ah Mijo-xaabinta milgihii iyo karaamadii Dawladnimo iyo masiirkii rabitaankii shacabkii dumadiisa Saarnaa ee codkooda ku doortay ee dirtay oo uu xuquuqdoodii dimuqraadiyeed majare habaabiyey. Waxay xukuumadii ku fashilantay in ay abuurto dhaqan dawladeed oo wadaninimo ku dheehan tahay. Muwaadin nala wadaaga fadeexadahan qaawan ee dul-hoganaaya Xukuumada Siilaanyo ee waqitigeedii dhamaaday:
1- Baarlamaankii shacabka wakiilka u ahaa ee la soo doortey oo Hawlgab noqday waqtigiisiina uu dhamaaday, kuwaas oo badankiisii noqday gole la shuraakoobay xukuumada shacabkii doortayna wer-wer iyo walaac ku beeray.
2-Xildhibaanadii Xasaanadooda uu dastuurku siiyey oo madaxtooyada dhexteeda lagu garaacaayo oo weliba lagu daawanaayo qaarna xabsiga lagu turun-turenaayo.
3- Waxaa dhacday in wixii sharci iyo sharaf inoo yaalay in awood dawladeed lagula dagaalamo oo la baabiiyo ,wixii heshiisyo la galayna la baalmaro.
4- Saxaafadii xorta ahayed oo cabudhin iyo cago jugleyn joogto ah lagu hayo oo Albaabada loo laabaayo Sida HUBAAl , HAATUF iyo SOMALIND Times
5- Bal u fiirso wasiirada qaarkood oo aan ku jirin ama ka caagan Xayndaabka birlabta ( magnet field ) ka dib markii koox yar oo ka buruud weyni ay taladii dalka af-duubeen oo ay gurada xaydaabka la galeen iyagiina ku shaa-shoobeen.
6- Waxaa mushtamaca SL wada daalacday Wasiiro muhiim ah oo saameyn taban ku leh talada dalka , kuwaas oo awood dheeraad ah leh oo aaney iyaga Karin seefta kala bedelka iyo isku shaandheyntu.
7- Hanti-boob, qandaraasyo boob iyo dhul boob lagu naas-nuujinaayo shaqsiyaad gaar ah iyo shirkado gaar ah, arintani waxay niyad jab iyo dhiig bax ku tahay shacabka isbedel-doonka ah ee reer Somaliland ee uu saameeyey sicir bararka iyo saxariirta sii baahaysa bil walba.
8- Waxay xukuumadani ku fashilantay in ay kala saarto qoysnimada iyo qaranimada,Taas oo badanka shacabka reer Somaliland ay hada u qaateen in Kacaan Xaafadeysani uu dalkii iyo dadkiiba qabsaday.
9- Waxay Xukuumadani ku caan baxday musuq-maasuq baahsan taas oo Qandaraasyadii iyo dantii guud ee qaranka ka dhigtay qaado-aan qaatee, kula lihi iyo kaa lihi iyo qudh-qudho joogto ah.
10- Maamul xumo awgeed qaar ka mid ah hayadihii dawlada iyo kuwii madaxa banaanaa oo galay muran beeleysan iyo gacan ka hadal
11- Waxay ku Fashilantey Xukuumadii kala Xadeynta Sadexdii waaxood ee Xukunka dalka Bud-dhiga u-ahaa, waa Xeer-dejinta, Fulinta iyo Garsoorkii.
12- Guurtidii oo dhex-dhexaadnimadii ka baxday oo xukuumada garabka saartay oo ilaalin wayday talo-wadaagii iyo aragtidii mideysneyd ee qaranimo.
13- Waxaa Buris iyo Baalmar noqday dhamaan heshiisyadii ay xukuumadu la gashay Xisbiyadii mucaaridka, Deeq-bixiyayaashii iyo Wadamadii Saxiibada JSL.Taas oo dalka ku soo jeedisay indhihii caalamka oo taban.
14- Waxay Xukuumadu wiiqday Sumcadii Doorashooyinka Somaliland lagu majeeran jiray ee ay kaga duwaneyd Dawlada Federaalka ah ee Somalia.
15- Waxay Xukuumadii Dabartay oo Hadaaq iyo Halhays iska noqday ictiraafkii JSL ku taameysay mudada dheer.
16 Waxaa shaashoobay dimuqraadiyadii iyo mawqifkii qadiyada qaranimada Somaliland, taas oo sii wiiqday iyana aragtidii mideysneyd ee shacbku lahaa.
17-Waxaa fashilmay oo waqtigeedii uu dhamaaday aragtidii gaabneyd ee deris-ku noosha aheyd ee xukuumadu dalka ku hogaamineysay 5-tii Sanadood ee la soo dhaafay taas oo ku saleysnayd hadaf waqti dheer ah iyo dacar isu marinta beelaha walaalaha ah ee wada dega degaanada Somaliland.
18- Waxaa mugdi galay masiirkii rabitaanka ummadda,sharaftii iyo sumcadii qaranimo,taladii iyo meel-marintii hawlihii dawladnimo ee loo igmaday
19- Xukuumada Siilaanyo waxay ku fashilantay waajibaadkeedii ahaa in ay doorashooyinka ku qabato waqtigii loo qabtay waxaana ay meel-kaga dhacday sharaftii iyo karaamadii dawladnimo,Dastuurkii qaranka iyo hanaankii dimuqraadiga ahaa ee 5 sanadlaha ahaa ee qori isu dhiib-dhiibka ahaa.
20- Waxaa dhacday in ilihii dhaqaalaha, magantii, mooradii iyo ganacsigaba loo xidho oo lagu naasnuujiyo shaqsiyaad gaar ah oo sameystay shirkado gaar ah ( monopolistic economy ) kuwaas oo si cadaan ah muquuno ugu qaatay anfacii, agabkii iyo dantii guud ee dalka.
21- Waxay Xukuumadu ku caan baxday qorshe wax qabad oo fashilmay oo been noqday maadaama aanu lahayn kala horeyn (priority ) kala hage iyo hor-joogeyaal, hilaad, hufnaan, taarget iyo tilmaameyaal lagu cabiro .
22- Waxay xukuumadu iibisay dhul badan iyo ilaa iyo 571 Guri oo guryihii dawlada ah , halkaas oo aanay shacabka u cadeyn halkii ay lacagtaa Malaayinka Dollar ahi martay. Waxaana ay carabka shacabka ugu cel-celisaa kuna canqarisaa “waxaanu dhisnay dhimayaasha 19 wasaaradood “,halka ay wasaaradahaa dhiseen deeqbixiya yaasha SL caawiya oo ay ugu horeyso Hayada USAID. Waxaa loo tiriyaa oo keliya in dawladu dhistay laba dhisme oo keliya.
Gunaanad: Qaranimada Somaliland waxaa ilaashanaaya shacabka Somaliland maadaama xukuumadii talada dalka loo igmaday ay ku fashilantay in dalka ka qabato doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo ay ilaaliso Dastuurka, midnimada iyo qaranimada shacabka Somaliland. Waa in Xisbiyada mucaaridka, madasha wadatashiga , ururada maxaliga ah iyo shacabka isbedel-doonka ah ee Somaliland ay rabitaankooda meel mariyaan oo ay la yimaadaan aragti mideysan oo ay cadaadis ku saaraan xukuumadan Maandhetkeedii dhamaaday si ay u cayinto waqtigii doorashooyinkan isbarkan la qaban lahaa. Somaliland waa dal jira jirina doona, Waxaana Dastuurka Somaliland qirayaa in dawladu masuul ka tahay in Doorashooyinku waqtigooda ku qabsoomaan si isbedel xalaal ahi u yimaado 5-tii sanadoodba mar oo doorasho xor ah oo xalaal ahi dalka uga dhacaan laakiin arintaa way ku fashilantay xukuumada talada maanta haysa ee is-huwan.
Waxaan idiinku soo garoocayaa- maanta !!
Weli dawliskii qarankeenu diri buu ku sii dhacayaa
Ee Allow sahal amuuraha aakhiro samaan oman baa yimiye! “
Alleh ayaa Mahad iyo Mudnaanba Leh
Wa Laahum-Aclam Wa-Billahi-Towfiiq
Previous articleRikoodhkoodii iyo Raad Raacii Madaxweyneyaashii kala danbeeyey ee soo maray Somaliland. Qalinkii A/rahman fidhinle UK‏ July 21, 2015
Next articleShirkadaha isgaadhsiintu waa ganacsiga koowaad ee hogaamiya ama ugu dakhliga badan caalamka,